Inselelo ye-Spacebar - Yonke Imininingwane Nezeluleko | XperimentalHamid
Inselelo ye-Spacebar - Yonke Imininingwane Nezeluleko
October 27, 2020 by I-Javeria Dinar
Ukuhlanya kwezokuxhumana kukhula mihla namalanga entsheni nasemphakathini jikelele. Izinselelo zingesinye isici lapho abasebenzisi balandela khona ukuthambekela okusha futhi benze okuthunyelwe kwabo ngokufanele.
Ngubani ongayazi i-The Savage Challenge noma iCinnamon Challenge? Kwesinye isikhathi izinselelo zingeqa imikhawulo futhi zibe yingozi kanye neBenadryl Challenge. Lo mbhalo uzokhuluma nge-Spacebar Challenge.
Ngokujabulisayo, inselelo yenkundla yesikhala seTikTok ithathe indawo yezokuxhumana, futhi ingcono kunazo zonke lezo zizwe. Ukudlala ndawonye, ​​uthola ukuhlola amakhono akho ubhekene newashi bese uziphenya ngemibuzo ukuze ubone ukuthi ulunge njengabo bonke abanye abantu.
Yini inselelo ye-Spacebar?
Inselelo ye-Spacebar i-Viral
Ungayenza kanjani inselelo yesikhala sesikhala seTikTok?
Amathiphu Wokuqedela Inselelo Yesikhala Sendawo Yomugqa
Ngabe unesithukuthezi futhi udinga inselelo entsha ye-Tiktok ukuzama? Kubukeka sengathi sinenselelo entsha kuTiktok njalo ngesonto. Kuleli sonto, sibona inselelo yesikhala esizwakala njengoba injalo.
Abantu baziqopha benza imibuzo ye-inthanethi ebala ukuthi umuntu angashaya kangaki ibha yesikhala sekhompyutha yakhe ngemizuzwana engama-30.
Ngokuya ngemibuzo ethathiwe, abanye bazama ukushaya ibha yesikhala izikhathi ezingama-300 ngemizuzwana engama-30 noma izikhathi ezingama-225 ngesikhathi esifanayo. Iwebhusayithi eku-inthanethi ilandelela inani lezikhathi lapho abasebenzisi becindezela khona ukhiye.
Ngamafuphi le nselelo, ibona abasebenzisi basebenzisa umdlalo we-inthanethi ukuzama ukushaya ukhiye (ibha yesikhala) kukhibhodi yabo yekhompyutha kaningi ngangokunokwenzeka.
Yebo, njengezinye izinselele eziningi, lokhu kuye kwasakazeka. The videos with Spacebar Challenge have found around 5 million views on Tiktok.
Ngakho-ke, abasebenzisi beTikTok bayaziqopha bethatha inselelo, noma baziqophe ngenkathi babuka abanye bethatha inselelo yebanga lesikhala le-TikTok.
Abantu bakhulisa ngisho nobunzima benselelo ngokusebenzisa amakhibhodi amaningi nezikrini ngasikhathi sinye. Abanye bathatha amavidiyo abo ngomculo njengokwasemuva kwabo ngenkathi iningi livumela ukuchofoza okusheshayo kwekhibhodi yabo ukuthi kube umsindo.
Lezi zinselelo zilutha ukubuka uma ungumuntu oncintisanayo ngoba uthola isifiso esikhulu sokufuna ukukhulisa ubuntu obudumile beTikTok. Futhi yilokho kanye abantu abazama ukukwenza.
Amasayithi amaningana akusiza ukuthi ukwazi ukuthatha inselelo ngokwakho. Sibone amasayithi amaningi asetshenziswa kumavidiyo akuTikTok futhi ngalinye linekhawunta ebukeka yehluke kancane.
I-Sporcle.com inomdlalo kusayithi labo lemibuzo enikeza isibali sikhathi sesikhathi semizuzwana engama-30 futhi inhloso ukuzuza ukushaya okungu-300 kwesikhala sendawo phakathi naleso sikhathi. ICodePen ine-counter spacebar, kepha lena ayiqukethe noma yimuphi umkhawulo wesikhathi, kepha izobala kulokho okubonakala kungapheli.
Futhi, iMentalFloss inemibuzo yokubala yesikhala ekhuthaza umsebenzisi ukuthi ashaye imivimbo engu-225 yekhibhodi kungakapheli imizuzwana engama-30.
Ukuthatha inselele, mane uye kwenye yalezi zingosi kukhompyutha yakho bese usebenzisa ifoni yakho, qopha ividiyo yeTikTok yakho uthatha inselelo yesikhala.
Funda mayelana Hoe kusho igama on Tiktok.
Maye! Amanye amasayithi akuvumela ukuthi ukhohlise inselelo ngokubamba isikhala sendawo kunokuba usicindezele kaninginingi. Kepha inselelo yangempela idinga ukuthi uyiqedele ngokwethembeka okugcwele.
Kungani ungazami ukusebenzisa iminwe yakho yezinkomba ezimbili ngasikhathi sinye ukushaya ibha yesikhala, noma usebenzise yonke iminwe emihlanu ngakolunye uhlangothi. Abasebenzisi abaningi abanamakhono bayakwazi ukusebenzisa yonke iminwe emihlanu ukuchofoza owodwa ngesikhathi ngokulandelana okusheshayo.
Sesha i-'Spacebar Challenge 'ku-TikTok ukuthola ukuthi abanye bayiqedela kanjani inselelo, bese uzama ukushaya amaphuzu abo aphezulu!
Izigaba FYI, I-Tiktok Amathegi Thepha i-Spacebar Challenge, Inselelo ye-Tiktok Spacebar Imeyili kwemikhumbi
Isahluko 1763-1764 seRevelnd Insanity Novel
I-Puzzle Yomlilo YeGenshin Impact Luhua